Cruso Granito: ကြွေတီများထုပ်ပိုးအသေးစိတ်
packing specification အကြောင်း
ထုပ်ပိုးခြင်းသည်0ယ်ယူသူ0န်ဆောင်မှု၏အခြေခံကျသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။. CRUSO - Surfaces Ceramicaထရပ်ကားများနှင့်ကွန်တိန်နာများ၏အကောင်းဆုံးဝန်အတွက်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအကွက်များနှင့် pallet ထုပ်ပိုးမှုအပေါ်အခြေခံသည်.
ပြားများနှင့်အရွယ်အစားကြီးမားသောအုပ်ကြွပ်များကိုပေးပို့ရန်နှင့်အလွန်အရေးကြီးသည်CRUSO - Surfaces CeramicaPROSSATING ဌာနသည် PARKES အရွယ်အစားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများအပါအ0င် Euro-size pallets,.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်များသောအားဖြင့်ဖောက်သည်၏တာ0န်0တ္တရားအောက်တွင်ရှိသည်။CRUSO - Surfaces Ceramica ဖောက်သည်များသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်စီမံရန်ကူညီရန်အပြည့်အဝကတိကဝတ်ပြုထားသည်. CRUSO - Surfaces Ceramica ဖောက်သည်0န်ဆောင်မှုဌာနသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဖောက်သည်များနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ collection များ
2022 Cruso Surfaces Ceramica | အားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲ LightLink Solutions
မင်္ဂလာပါ အပေါ်ထားရန်အောက်ဖော်ပြပါကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုနှိပ်ပါ WhatsApp သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ [email protected]